एक्सनमा प्रहरी : उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि पक्राउ पर्ने ! - Birgunj Sanjalएक्सनमा प्रहरी : उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि पक्राउ पर्ने ! - Birgunj Sanjalएक्सनमा प्रहरी : उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि पक्राउ पर्ने ! - Birgunj Sanjal
एक्सनमा प्रहरी : उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव पनि पक्राउ पर्ने !
५ कार्तिक २०७६, मंगलवार १४:३५
वीरगन्ज । हाई प्रोफाइल अपराधीहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि अन्य नेताहरुसमेत त्रसित भएका छन् । प्रहरीले विगतका राजनीतिक आवरणमा छोपिएका अपराध खोतल्ने डरले उनीहरु डराएका छन् ।
गृहमन्त्रीका भाइदेखि सभामुख कृष्णबहादुर महरासम्म प्रहरी फन्दामा परिसकेका छन् । ६ पटक मन्त्री भइसकेका काँग्रेस सांसद अफताब आलम समेत प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । यसले अपराधमा संलग्न अन्य नेताहरुलाई पनि त्रसित बनाएको हो । विगतमा चलखेल र दबाबका भरमा लुकाइएका धेरै घटनाहरुको फाइल पल्टाउने प्रहरीको तयारी छ ।
रौतहटको १२ वर्षअघिको घटनामा कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफ्ताव आलम पक्राउ परेपछि रौतहटकै अन्य पुराना घटनाको अनुसन्धानको दबाब प्रहरीमाथि परेको छ । यसरी पुराना घटनाको अनुसन्धान भएमा सरकारका उपप्रधानमन्त्रीकै पद खुस्कने निश्चित छ । हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवविरुद्ध जाहेरी जिल्ला अदालत रौटहटमै १३ वर्षदेखि विचाराधीन अवस्थामा छन् ।
७ चैत २०६३ मा गौर नरसंहार भएको थियो । जसमा २७ जना माओावदी कार्यकर्ताको विभत्स हत्या भएको थियो । माओवादी कार्यकर्ताहरुलाइ लखेटी लखेटी विभत्स ढंगले हत्या भएको थियो । त्यो घटनामा तत्कालीन मधेशी जनाधिकार फोरमका नेता यादवविरुद्ध मृतकका परिवारले उजुरी दिएका थिए ।
तर अहिलेसम्म त्यो घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले गरेको छैन । आलमलाई पक्राउ गरेपछि यादवलाई पनि पक्राउ गरी कारबाही गर्न गौर हत्याकाण्डका पीडितहरु प्रहरीमा जान थालेको स्रोत बताउँछ । साभार :दृष्टि साप्ताहिक